ဘာသာစကားတိုင်းမှာ အရောင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အသုံးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ အရောင်အသွေးဆိုတာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ ရှိတယ်။ အဲ့ဒီတော့ နေ့စဉ်သုံး စကားတွေမှာ အရောင်တွေကို တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်ပြီးတော့သော်လည်းကောင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စရိုက်၊ အမူအကျင့်၊ လှုပ်ရှားမှုတွေ ခိုင်းနှိုင်းကာ ပမာပေး ပြောဆိုကြပါတယ်။
အရင်တစ်ခေါက်တုန်းက English မှာ အဖြူနှင့် အမည်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့အသုံးတချို့ကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ အခြားအရောင်နဲ့ဆိုင်တာလေးတွေကို ဆက်လက် တင်ပြချင်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်မှာ ပန်းရောင်ကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းပြောကြတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကျန်းမာရေး ကောင်းတယ်ဆိုရင် “in the pink”လို့ ပြောကြတယ်။ ကျန်းမာရေးကို pink နဲ့ ဘာကြောင့် တင်စားသလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းရလွယ်ကူပါတယ်။ အသားအရေ အဖြူရောင်ရှိတဲ့ အနောက်နိုင်ငံသားတွေက သူတို့ရဲ့မျက်နှာက ကြည်လင်နေပြီး ပန်းရောင်သန်းနေရင် သွေးလေမှန်ပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ မျက်နှာ ဖြူဖတ်ဖြူရော် ဖြစ်နေရင် ကျန်းမာရေး မကောင်းဘူးလို့ ဆိုကြတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင် pale သို့မဟုတ် gray ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ white လို့တော့ မပြောရဘူးနော်။
– When you are in the pink, your health is good, when you look pale or grey, you may needadoctor.
Red ဆိုတဲ့ အနီရောင်ဟာ pink ထက် ပိုပြီး စူးရှပြင်းထန်တဲ့အရောင် ဖြစ်ပါတယ်။ အနီရောင်ကို ပူပြင်းတက်ကြွစေတဲ့ စိတ်ခံစားချက်၊ ကိုယ်ခန္ဓာခံစားချက်အပြင် စပ်တဲ့အရသာကိုပါ တင်စားပြောကြတယ်။ အစပ် အရသာကဲတဲ့ မြန်မာဟင်းလျာတွေမှာသုံးတဲ့ ငရုတ်သီးမှုန့်ကို red hot လို့ ခေါ်လို့ရပါတယ်။ အလားတူပဲ မြူးကြွတဲ့ တေးဂီတကိုလည်း red hot လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ အကယ်လို့ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းက “in the red” ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင် လုပ်ငန်းအရှုံးပေါ်နေတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
– If your business is in the red, you are makingaloss.
အရှုံးအမြတ်စာရင်းမှာ အမြတ်စာရင်းကို မင်အနက်နဲ့ မှတ်တာဖြစ်ပြီး အရှုံးစာရင်းကို မင်နီနဲ့ မှတ်သားရလို့ red ဆိုရင် အရှုံးပေါ်တာလို့ ဆိုလိုတာပါ။ အကယ်၍ သင်ဟာအနီရောင်ပဲ မြင်တော့တယ် “see red” ဆိုရင်တော့ သင့်စိတ်တွေကို လျှော့ချဖို့လိုလိမ့်မယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ‘to see red’ ဆိုတာ အရမ်းစိတ်ဆိုး ဒေါသထွက်နေတယ်လို့ ဆိုတာကြောင့်ပါ။
– If you see red, you suddenly become angry.
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်က ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီပေးပွဲ ကျင်းပတော့ နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်တွေ ဝင်လာမယ့် လျှောက်လမ်းမှာ အနီရောင်ကော်ဇော red carpet ခင်းထားပြီး ကြိုဆိုတာကို တွေ့ကြရမှာပါ။ အဲ့ဒါက လေးစားပြီး ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ လုပ်ပေးတာပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို တလေးတစားနဲ့ ပြုမူဆက်ဆံတယ်ဆိုရင် to give red carpet treatment လို့ ခေါ်တယ်နော်။
Blue ဆိုတဲ့ အပြာရောင်ကတော့ အေးချမ်းတဲ့အရောင်လို့ ဆိုပါတယ်။ တေးဂီတစကားနဲ့ ဆိုရင်တော့ အလွမ်းအဆွေးသဘောကို ဆောင်ပါတယ်။ red hot music နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့။ အမေရိကန် လူမည်း တေးဂီတရှင်တွေရဲ့ traditional blues music တွေကို နားထောင်ကြဖူးမှာပါ။ Blues music က ညင်သာတယ်။ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာနဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေအပြည့်ပါတယ်။ အပြာရောင်ရင့်ရင့်ကို indigo လို့ခေါ်တယ်။ အမေရိကန်အဆိုတော် Duke Ellington ရဲ့ နာမည်ကျော် Mood indigo ဆိုတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ထဲမှာ “You aren’t been blue till you’ve had that Mood Indigo.” လို့ ဆိုသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် to be blue တို့ to feel blue တို့ဆိုရင် ဝမ်းနည်းနေတယ်လို့ ပြောတာနော်။
အစိမ်းရောင် green ကတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိသင့်ရှိရမယ့် အရောင်တစ်ရောင် ဖြစ်ပေမယ့် လူသားတွေအတွက်ကတော့ မရှိသင့်တဲ့အရောင်ပဲ ထင်ပါရဲ့။ နေထိုင်မကောင်းတဲ့သူ၊ အထူးသဖြင့် ခရီးသွား ရင်းကားမူး၊ လှိုင်းမူးဝေဒနာ ခံစားနေရရင် to look green လို့ ပြောတယ်။
– “Are you OK? You look green.”
မနာလိုသဝန်တိုဖြစ်ရင်လည်း green နဲ့ ခိုင်းနှိုင်းပြောဆိုကြတယ်။ သူများက ကိုယ့်ထက်သာလို့ မနာလိုဖြစ်ရင် to be green with envy လို့ ပြောတယ်။
– Some people are green with envy because someone has more money.
Shakespeare ရဲ့ ပြဇာတ်တစ်ပုဒ်မှာ မနာလိုဝန်တိုတတ်သူကို green-eyed monster လို့တင်စားပြီး ရေးခဲ့တာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ သည်းခြေကြိုက် အမေရိကန် ဒေါ်လာကို ‘greenbacks’ လို့ ခေါ်တယ်နော်။ ဒေါ်လာငွေစက္ကူရဲ့ အထင်ရှားဆုံးအရောင်ဖြစ်တဲ့ အစိမ်းရောင်ကို တင်စားပြီးခေါ်တာပါ။
Black ဆိုတဲ့ အနက်ရောင်ကိုတော့ သိပ်မကောင်းတဲ့ အရောင်အဖြစ် တွေ့ရပါတယ်။ မိသားစုဝင်တွေထဲမှာ ဆိုးသွမ်းတဲ့ သားသမီးတစ်ဦးဦးရှိရင် black sheep လို့ ခေါ်ကြပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင်၊ ဌာနဆိုင်ရာနှင့်အစိုးရအဖွဲ့တွေမှာတော့ နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းတာကို blacklist လုပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မြိုင်ရာဇာ
တွတ်ပီရဲ့ လက်သုံးစကားဖြစ်တဲ့ “ဒီကနေ့ ကံမကောင်းပါလား” ဆိုတာကို အင်္ဂလိပ်မှာ black day လို့ ခေါ်တယ်။ ကိုယ်လုပ်သမျှ ကိစ္စအဆင်မပြေရင် အဲ့ဒီနေ့ကတော့ black day ပဲပေါ့နော်။ ကိစ္စတစ်စုံတစ်ခုကို အများမသိစေချင်လို့ သတင်းအမှောင်ချတယ်ဆိုရင် black out လုပ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက ဗုံးကြဲလေယာဉ်တွေ မမြင်ရအောင် ညအချိန်မှာအိမ်တွေကို မီးတွေပိတ်ခိုင်းတာကို black out လုပ်တာလို့ ခေါ်ပါတယ်။
အဝါရောင် Yellow ကိုတော့ သူရဲဘောကြောင်တဲ့ အရောင်အနေနဲ့ သုံးကြပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကြောက်နေတယ်ဆိုရင် to be yellow လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Yellow fever ဆိုတာကတော့ အသည်းရောင် အသားဝါ ရောဂါကိုခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါက ကူးစက်ရောဂါမို့ ရောဂါဖြစ်သူကို သီးခြားထားပြီး ကုသလေ့ရှိပါတယ်။ ရှေးရှေးတုန်းက yellow fever ရှိတဲ့ လူနာပါတဲ့ သင်္ဘောတွေမှာ အခြားသူတွေ သတိထား ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ အလံတင်ထားရပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုအလံကို ‘yellow jack’ လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အရောင်အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် ပြောမကုန်နိုင်ဘူးနော်။
VOA Learn English ၊ Collins COBUILD English Usage နှင့် Collins COBUILD Dictionary စာအုပ်တို့မှ ကိုးကားဘာသာပြန်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။